कुरा चर्का तर काम शून्य, यी दुई प्रदेशसभा सदस्यका !
२५६९ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ आषाढ ०७ , ११:५६ बजे
महेन्द्रनगर, ७ असार । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको अर्बौको जग्गा गैरकानुनी लिजमा दिइएको विषयतर्फ प्रदेश सरकारको समेत ध्यान जान सकेको छैन । मुखले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको प्रकरणका विरुद्ध चर्का कुरा गर्ने कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ का दुबैजना प्रदेश सदस्यले व्यवहारमा भने सिन्को भाँच्ने काम गरेका छैनन् ।
नगर विकास समितिको स्वामित्वको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावल र मानबहादुर सुनारले यो घोटालाबारे अहिलेसम्म प्रदेशसभालाई जानकारी समेत गराएका छैनन् । तर, मिडियासँग भने उनीहरु आजको भोलि नै कायापलट हुने जस्तो कुरा गर्छन् ।
दुबैजना प्रदेशसभा सदस्यले अहिलेसम्म मिडियामा बोल्नुबाहेक अरु काम गर्न भ्याएका छैनन् । छानविन उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र नगर विकास समिति बैठक बस्नका लागि उनीहरुले कुनै किसिमको भूमिका नगरेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य मानबहादु सुनारले लिज घोटालालाई अब मुख्य मुद्दा बनाउने बताए । उनले नगर विकास समितिको जग्गामा व्यापक घोटाला भएकोले यसलाई तत्काल निस्क्रिय पारिने आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए ।
सुनारले लिज घोटालाबारे आफूले समय समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई घचघच्याएको बताउँदैँ भने, ‘तत्काल नगर विकास समितिको बैठक बोलाई छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनु पर्छ, होईन भने एक्सन लिन्छौँ ।’ तर उनले कस्तो एक्सन भन्ने खुलाएनन् ।
घोटालाको छानबिन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन लागि तत्काल पहल नभएमा प्रदेशसभामा समेत उठाईने उनले बताए । सुनारले आफू निर्वाचित भएपछि यस्तो भन्दै आएका छन् तर उनले अहिलेसम्म प्रदेशसभालाई यसको लिखित जानकारी समेत दिएका छैनन् ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले लिज घोटाला सम्बन्धमा तत्काल कारबाही गर्न आफूले समय–समयमा आवाज उठाएको बताए । तर, उनले मिडियामा बाहेक आधिकारिक च्यानलमा आवाज उठाएको पाइएको छैन । उनले छानविन प्रतिवेदनका पक्षमा आफू उभिएको बताए । उनले आफूसँग अधिकार नभएको लाचारी समेत व्यक्त गरे । नगर विकास समिति कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्नेस्पष्ट नभएको आफू अलमलमा परेको बताए । जुन सरकार मातहत भए पनि आवाज उठाउन रोक नहुने तथ्य भने उनलाई थाहा नभएको पाइयो ।
लिज घोटालामा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको गहिरो सम्बन्ध रहेको देखिएको छ । नगरको करिब १० अर्ब रुपैयाँको जग्गा मनोमानी लिजमा दिने र दिनेमा प्रदेशसभा सदस्यद्वयकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता अधिक छन् ।
लिज घोटाला : किन डराए कञ्चनपुर–३ का सांसदहरु ?
लिज घोटाला : गैरकानुनी सम्झौता बदर हुने सम्भावना बढ्दै
यसरी दबाउन खोजिँदैछ १० अर्बको लिज घोटाला !